ဖားပန်အေးချမ်းကျေးရွာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းလေးးးးးး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖားပန်အေးချမ်းကျေးရွာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းလေးးးးးး
Posted by ကထူးဆန္း on Mar 27, 2013 in Copy/Paste | 25 comments
( ကျွန်တော် တို့ ရွာသားကြီး ကိုထွန်းဝင်းလတ် မှ တင်ပေးဖို့ အကူ အညီတောင်းလာသော ကြောင့် တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။)
ရွာကလေးက အနာဂတ်ကြယ်လေး၏ ရင်ဖွင့်သံ….
ကျနော်ကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးဒေသ
ဖားပန်အေးချမ်းကျေးရွာက ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပါ… ကျနော်ဒီနှစ်
ဂရိတ်တူးခေါ်တဲ့ ပထမတန်းစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုထားပါတယ်…ကျနော့်နာမည်လေးကတော့
ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်…ညီလေးကတော့ ဒီနှစ် ဂရိတ်ဝမ်းခေါ်တဲ့
နာမည်ကြောင့် ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်တို့က ကျနော့်အဖေကို လူပျင်းကြီးလို့
ကျနော်တို့ မောင်နှမသုံးယောက်နဲ့ အဖေအတွက် ချက်ရေးပြုတ်ရေးကို
တာဝန်ယူတဲ့အပြင် အားလပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ တောထဲကို
လမ်းဘေးရောက်အောင်သယ်ပို့ပေးရတာတဲ့…. လမ်းကို ကတ္တရာခင်းပြီး
လူကြီးတွေက ကျောက်တွေရော..ကတ္တရာတွေရော စားတယ်ဆိုလား…ကျနော် အံ့ဩလို့
ကားကြီးနဲ့လာတော့ မြင်သွားပြီး မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတွေကို
နောက်တစ်ခါလာရင် ဒီကျောင်းကို ဒီပုံအတိုင်းမမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့
တောထဲကနေ တိုင်တေ၊ွပျဉ်တွေရဖို့ ဝိုင်းပြီးကြိုးစားထားကြလို့..ခုဆို
အဲ့ကျောင်းလေးကို ဒီနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အပြီးဆောက်ရမယ့်လို့
မိန့်ကြားတာကြားမိသဗျ… တစ်ချို့မိဘတွေကတော့ သူတို့သားသမီးတွေကို
ကိုဖိုးတူးကတော့ ပျော်နေတယ်…သူသားရှေ့နှစ်ကို လေးတန်းရောက်မှာလေ…သူ့က
အရင်းပြုတည်ထောင်ထားတဲ့..ဒီကိုယ်ထူ ကိုယ်ထကျောင်းလေး အဖျက်မခံရစေဖို့
အကယ်၍များ ကျောင်းလေးကို ဖျက်ခံရမယ်ဆိုရင်
ရွာကကျောင်းလေး အပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါ…
တစ်ရွာလုံးက အိမ်တွေကို ဝယ်ပစ်လို့ရတယ်ပြောတာပဲ…
ကျနော်တို့ရွာက ကလေးတွေ ရွာနဲ့မခွဲပဲ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်
ပညာတွေသင်ပြီး ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်လာကြပြီး နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ
ကျနော်တို့ကိုပြောဘူးတယ်….နာမည်ကျော်တွေ နာမည်ကြီးတွေက တောသားတွေကွတဲ့….
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ..ကျနော်ကတော့ ညအိပ်ယာမဝင်ခင် ဘုရားရှိခိုးတိုင်း
ရွာကစာသင်ကျောင်းလေးကို ပြီးစီးအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ပေါ်လာပါစေလို့
စိတ်ပါဝင်စားသူများ ရှိပါလျှင် ……………
ငွေတင်မကဘူးးးးး အွန်လိုင်းးးကွန်နက်ရှင်ပါ ချို့တဲ့နေလိုက်တာ..
ကဲ…ဂေဇက်အပေါင်းတို့ရေ..ကျနော်တောသားးးးအလှူခံဖလားကြီးပိုက်ပြီးးရွာထဲကို ကို့ယိုးကားယား ဝရုန်းသုံးကားးပြန်ဝင်လာပါပြီ…ဒီကျောင်းလေးအတွက် One More အဖွဲ့ကြီးကို အကူအညီ တောင်းခံထားပါတယ်….အကယ်၍ မရခဲ့လျှင်….ကျနော်တို့ တဂျီးးးအူးးးးခိုင်…အုပ်ချုပ်စီမံနေသော ဂေဇက်ရွာကြီးမှ ကူညီကြပါဦးလို့ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်…။
လှုမယ်ဆို ဘယ်ကို ဆက်သွယ်ပြီး ပေးရမှာတုန်းဗျ ???
KZ ရေ .. ကိုထွန်းဝင်းလတ် တင်မရဖြစ်နေလို့ တင်ပေးပါဆိုလို့ ကွန်လေးလဲ ကောင်းနေတာနဲ့ ကောက်တင်လိုက်တာ ဆိုတော့
အလှုငွေလက်ခံဖို့ လူဆိုး.. အဲ အဲ .. :hee: လူကောင်းတွေနဲ့ မတိုင်ပင်ရသေးလို့ …
ရွာ့ ကုသိုလ်ရေး လက်မနှေး နေကြဖြစ်တဲ့ လေးပေါက် ၊ကိုရွှေတိုက်၊ ကို အမတ် ၊ ဦးဦးပါ ၊ အန်တီ ပဒုမ္မာ တို့ များ လိုအပ်လျှင် ကူညီပေး နိုင် မလားဆိုတာ ဒီကဘဲ မေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ ။
ကိုထွန်းဝင်းလတ်က တော့ one more အဖွဲ့ ကြီးကိုလည်း အကူ အညီတောင်းခံ ထားပါတယ် ဆိုတော့ အလှုငွေ ထည့်ဖို့ စိတ်ဝင်စားကြတယ် ဆိုရင် လောလောဆယ်တော့ comment လေး နဲ့သာ တို့ထားပေးပါဦးခင်ဗျာ ..
Ready ပါ ကထူးဆန်းခင်ဗျ…. ဘယ်လို Plan နဲ. အလှူငွေကောက်ခံမလဲ ဆိုတာသာ စီစဉ်ပါ…
ကွန်မင့် ပေးတာ ဘာဖြစ်နေတယ်မသိ
နိုင်သလောက် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ရတာပေါ့
အစိုးရက.. သူ့ဘက်ဂျက်တွေ.. စစ်တပ်ဖက်မှာ.. စွတ်သုံးနေတာ.. လွှတ်တော်ကလည်း. ဘာမှမပြောနိုင်..
မိတ္ထီလာအရေးအခင်းဖြစ်တော့.. စစ်တပ်ဝင်ရသမို့.. ကလေးတွေကျောင်းဆောက်ဖို့.. ငွေတွေ.. အဲဒီထဲအလဟသဘယ်လောက်ဝင်မျောပျောက်သွားသလည်း.. တွေးနေမိတယ်..
အခုလည်း.. တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ.. ရဲ..တပ်တွေ..အချိန်ပိုကြေးနဲ့.. တိုင်းပြည်ဘက်ဂျက်သုံးနေကြရပြန်ပြီ..။ အဲဒါ.. ကလေးတွေရဲ့.. ဘဝနောင်ရေးအတွက်.. ငွေတွေပါ..။
ဒီသံသရာဘီးရပ်ဖို့.. လွှတ်တော်မှ.. တခြားဘက်ဂျက်တွအားလုံးလျှော့ချ..ဖြတ်တောက်.. .. ကလေးပညာရေးထဲ.. ပုံချပေးစေလိုပါကြောင်း..
ကလေးတွေကြီးလာချိန်မှာ.. သံသရာဘီး..နှေးလိုက်လာပြီး.. လုံးဝရပ်သွားပါမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း..
စုပေါင်းလှူဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ပါ့မယ်။
ဒီနေ့ပဲ သီလရှင်ကြီးတစ်ပါးတည်ထားတဲ့ စေတီနားက ဖြတ်သွားတော့ အဲဒီမှာကုန်ကျခဲ့တာတွေကို ကလေးတွေရဲ့ပညာရေး ကျန်းမာရေးတွေအတွက် သုံးဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားမိသေးတယ်။
အော်…. ဒုက္ခ ဒုက္ခ
ပိုက်ဆံရှာတာ ဘာအတွက်ရှာသလဲ ဆိုတာရဲ ့အဖြေ နောက်ဆုံးဟာ
စိတ်ချမ်းသာမှု ရအောင် ဆိုသလို
စိတ်ချမ်းသာမှု ရအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုတာရဲ ့အဖြေဟာ
အဲဒိလို အဟောသိကံ ဖြစ်နေတဲ့ အလှူတွေ အများကြီးရယ် မမ ဒို့ဗမာတွေ အများကြီး ပြင်ရဦးမယ် တစ်ကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားက မရိုင်းဘူး သူ့အိုးသူ့ဆန် တန်အောင်ပြောခဲ့တာ ……။
အလှူတစ်ခုမှာ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အကျိုးကိုပဲ ကြည့်ပြီးလှူတဲ့အလှူက အမြင့်မြတ်ဆုံးပါတဲ့….။ တော်တော်များများကတော့ ကိုယ့်ကျိုးကိုပဲ ကြည့်တဲ့အလှူတွေချည့်လိုဖြစ်နေတာ စိတ်မကောင်းရုံကလွဲပြီး ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်လို့ …………။ ( ခါးမသန်တဲ့ ခါချဉ်ကောင်က မာန်ကြီးနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ……… ။ )
လောလောဆယ် ကျွန်တော် လည်း..ဆုတောင်း ရုံ ဆန္ဒပြု ရုံပဲ..တတ်နိုူင်သေးတယ် ဗျာ ။
ကိုလင်းဝေ ပြောခဲ့တဲ့ စကားသွားသတိရတယ်..
တိုင်းမူး ဆိုတဲ့ လဒ ပြောခဲ့တဲ့စကားကို ဖတ်ပီး..
ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်..လုပ်နေသရွေ့ကတော့
ပေါက်နေတဲ့ရေဗူးကို မဖာဘဲ နီးမှ သေးပေါက်ထည့်ပီး လာပေးမယ်
ဟိုသာထိန်းဒွေ ဘောလုံးအသင်းတွေ ထောင်မယ့်အစား ဒီလိုနေရာတွေမှာသာ
လှူမယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတော့ ဝင်မိပြန်ရော…
မော်လူးနားမှာ အမျိုးစုံတွေ ဖြစ်ပျက်နေတုံးမှာ တို့ရွာက
ကိုထွန်းဝင်းလတ် အသံတိတ်နေလို့ သတိရနေမိသေးတာရယ်…
ခုကျောင်းကလေးမှာ စာသင်ဆရာမှရှိရဲ့လား စိတ်ပူမိပါတယ်…
One More မှာတော့လတိုင်းလှုဖြစ်တယ်..
တစ်တပ် တစ်အား ပါဝင်ပါ့မယ်
တစ်တပ် တစ်အား နိုင်သလောက် ပါဝင်ကြတာပေါ့
ကျုပ်လဲ တစ်ပုံးလောက် လှူဘို့ လျာထားကြောင်း…
အဲဒါ … အဲဒီပိုက်ဆံမကုန်ခင် (မသုံးမိခင်) အလှူငွေကောက်မယ့်အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါကြောင်း..။
နိဗ္ဗာန်ဆော်များဖြစ်ကြတဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ်နဲ့ ကိုထူးဆန်းတို့ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…
မြန်မာနိုင်ငံက ရဲတွေ စစ်သားတွေ မှာ အချိန်ပိုကြေးဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး…
အင်မတန်ဆင်းရဲ အင်မတန်ပင်ပန်းပြီး ဒုက္ခခံပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့ထဲက စုန်းပြူးတစ်ချို့ကြောင့် လူမုန်းခံကြရတာလဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး ကျန်းမာရေးတွေအတွက်
အခြား ချွေတာလို့ရတဲ့နေရာမှာ ချွေတာကြစေချင်တယ်။
ဥပမာ- ကျုပ်ဆို သုံးခွင့်ရှိတဲ့ငွေက တိကာတိုင်းကာပဲရှိတော့
အိုင်ဖုန်းဖိုက် ဝယ်မယ့်ပိုက်ဆံကို ဟွာဝေးလေးပဲဝယ်ပြီး ပိုအကျိုးရှိမယ့်နေရာမှာသုံးတယ်
(အဲဒါကုန်တော့မယ် ရွှေတိုက်ရေ….။ နင်လက်ဦးအောင် အလှူလာကောက်..)
နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး လူမှု့ရေးဖက်က ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ခေါင်းဆောင်တွေ လုပ်စေချင်မိတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်က ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာ ငွေကို ဆင်းရဲသားလိုသုံးရမယ်
အရေးကြီးတာကို လက်တွေ့သုံး၊ သိပ်အရေးမကြီးတာကို အောင့်ထား
ကျေးဇူးပါ ဗျာ ။ ကိုထွန်းဝင်းလတ် ဆီက သိမှဘဲ အလှုငွေ ကောက်သင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်မှာမို့ လောလောဆယ်တော့ information လေး တစ်ခုပါဘဲ ခင်ဗျ။
ကြိုဆိုပါကြောင်း.. သာဓုခေါ်ပါကြောင်း..။ :harr:
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ်သောင်း တိုးမြှင့်ခန့်မည်
သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမအင်အား လိုအပ်ချက်ရှိနေသည့် အခြေခံပညာ ရေးကဏ္ဍအတွက်လာမည့်ပညာ သင်နှစ်အမီ မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ အင်အား တစ်သောင်းတိုးမြှင့်ခန့်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦးက မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။”နေရာဒေသအလိုက် လိုအပ်ချက်အရ အင်အားဖြည့်တင်းတဲ့သဘောပါ။…
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမဝန်ထမ်း နေရာလျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့တွင်
ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့်ပညာသင် နှစ်အမီ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
ကိုလည်း မေလအတွင်း တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးကိုကိုတင်က ပြောကြားသည်။
အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် နှစ်စဉ် ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို တိုးမြှင့်သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၂-၁၃
ပညာသင်နှစ်တွင် ငွေကျပ်ဘီလျံ ၆၀ဝ ကျော် အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း လာမည့်ပညာသင်နှစ်
အတွက် ငွေကျပ် ဘီလျံ ၉၀ဝ အထိ တိုးမြှင့်သုံးစွဲမည်ဟု ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ကယားပြည်နယ်
သို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်တွင် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းက ပြောကြားခဲ့ဖူး
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ မလိုအပ်သော ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူအသုံးပြုရန်လျာ
ထားသည့် ငွေကျပ် ဘီလျံ ၃ဝ ကျော်အား အခြေခံ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် သဘောတူညီခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ရွာသူရွာသားတွေ အားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်း ဆက်ပါရစေ…..
အလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားကြ အားတက်သရော ရှိကြတာတွေ မြင်ရ ဖတ်ရတော့ ဝမ်းသာလိုက်တာ.. ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အဓိက လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေး ကျန်းမာရေးတွေ အတွက် တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကျနော့် အတွက် အားတက်မိသလို ..သာဓုလည်းးး အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်မိပါတယ်…. အခုကျောင်းလေးအတွက်တော့ One More အဖွဲ့ မှ သိန်း(၂၀) ကျပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ အလှူငွေ ပေးအပ်ပွဲကို ဧပြီ (၁၃) ရက်နေ့မှာ ဖားပန်အေးချမ်း ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါမည်…..အလှူအတွက် သာဓုခေါ်နိုင်စေရန်နှင့် အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ အထူးကျေးဇူးတင်ရသည်မှာ ရန်ကုန်မှ မန်းလေးသို့ လွဲပေးသော ငွေများကို မော်လူးသို့ ရောက်ရှိစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော လေးပေါက်ပါ……..လှူဒါန်းပေးသော One More အဖွဲ့ကြီးကိုလည်း ရွာသူရွာသားများကိုယ်စား ကျနော်မှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်…..
ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရေ ဝမ်းသာဝမ်းမြောက် သာဓု ခေါ်ပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံကတော့ တလွဲဆံပင်ကောင်းလို့ ကောင်းနေတုန်းဗျာ။ အားမရဘူး အပေါ်ယံ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်လုပ်ချင်စိတ်တွေများနေသလိုပဲ စနစ်တကျ တိုးတက်အောင်မလုပ်တတ်တော့တာများလား…။
ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရေ .. ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ .. ကျွန်တော်လည်း ခရီးထွက်နေလို့ ရွာနား မရောက်နိုင်လို့ …
အခုမှ ပြန်နိုင်ပါတယ် ။
အခု ဆို အလူငွေ ပေးအပ်ပွဲ လုပ်ပြီး လောက်ပြီနော် ။။
အပင်ပန်းခံ လုပ်နေတဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ် ၊ အမြဲတန်းလိုတဲ့ နေရာ ဖြည့် ပေးတဲ့ လေးပေါက် တို့ကို အထူး အားကျ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ ပရဟိတ လုပ်နေနိုင်သူတိုင်းကို အားကျမိပါတယ်။